WARBIXIN dhacdo hada taagan ah “Xamar Weyne inuu xiran yahay Xasan Shiikh ma loo sheegay?” | kowtharmedia.com
Home WARAR WARBIXIN dhacdo hada taagan ah “Xamar Weyne inuu xiran yahay Xasan Shiikh ma loo sheegay?”
WARBIXIN dhacdo hada taagan ah “Xamar Weyne inuu xiran yahay Xasan Shiikh ma loo sheegay?”
Suuqa Xamarweyne waxa uu ka mid yahay suuqyada ugu caansan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho .Waxa uu ku yaallaa Muqdishadii qadiimiga aheyd sidaa awgeed waa dhulkii faras magaalaha ahaa ee qarniyaal aad u badan soo jiray .Xamarweyne dhismooyinka muhiimka ee ku yaal midba waxbaa lagu xusuustaa ka hor gumeysigii iyo kadibba. Suuqa Xamar weyne burburkii ka hor Soomaali kaliya kuma ganacsan jirin ee waxa ka shaqeysan jiray ajnabi kala duwan sida Hindi ,Carab , Talyaani iyo shisheeye kale.
Suuqa Xamar weyne hadda waxa lagu wareejiyay biro waaweyn oo aan loo ogoleyn gawaarida in ay ka gudbaan oo ah baro koontrool oo la dhigay,ma ahan dhan kaliya ee waa dhinacyada oo idil marka laga reebo dhawr waddo.
Aniga oo aan muddo tagin Xamar Weyne ayaan habeen hore tagay meel walba oo suuqa iyo xaafadda laga galo bir baa taal ,markaad u dhawaato askari ilaalo ah ayaa kugu soo ifinaya toosh, hadii aad ku sii socoto dhankiisa dhib weyn in uu kaa soo gaari karo ayaa dhici karta,waxa ay dantu ugu kaliftay in halkii aan rabay aan u lugeeyo oo aan gaarigii iska dhigo.
Suuqa dhexdiisa xitaa bir dheer baa wadada ku xiran halkii la dhihi jiray Cabadalla Shaddaya. Ganacsatadii qaarkood ayaan wareystay waxa mid ka mid ah uu la soo booday Xamar Weyne saan buu ku xiran yahay! Xaalku waxa uu sii adkaaday markii xarunta gobolka Banaadir loo soo celiyay halkii la dhihi jiray Officio Governo oo ugu yaaraan afar wado goostay, saldhiga bartamaha wadd ayaa u xiran oo bir ay u taal , Maxkamadda sare labo dhan ayay iska xirtay ,laga soo bilaabo round about-kii ka horjeeday Ospedale di Martini ilaa iyo halkii laga gali jiray badda Geel laq.Bankiga dhexe waddo ayaa u go’an ,niman ganacsato ah oo Mall weyn ka dhistay suuqa Xamar Weyne dhexdiisa waddadii ayay biro ku xirteen .
Degmooyinka Xamar weyne ugu dhow sida Shangaani iyo C/casiis waddooyinkii loo mari jiray waa la xiray ,shacabkuna waxa ay ku qasban yihiin in ay ka soo wareegtaan meel fog ama ay doon soo raacaan Xamar Weyne.
Dhamaan sababaha loo xiray waddooyinkaas waxaa laguugu sheegayaa in ay yihiin ammaan awgiis . In xudduntii Muqdisho la kala xirxiro si ka duwan oo amniga loo sugi karaa miyaanay jirin?
Waxaa si weyn hoos ugu dhacay ganacsigii sababtoo waddooyinka yare e furan waxaa ay noqonayaan Jaam kuwo buux dhaafay marka suuqo furmo,waxana ay kugu qaadaneysaa saacado badan inaad suuqa gudaha u gasho oo aad ka soo dukaameysato.
Madaxda sare ee dowladda waxaa haboonaan laheyd in ay shacabka dareenkooda warsadaan oo ay cabashooyinka ay qabaan kala sheekeystaan , wixii culeyska ee laga fududeyn karana la iska kaashto ,laakiin waxaa dhici karta inaan masuuliyiinta loo sheegin culeyska iyo cabashada weyn ee taagan amaba siyaasad ay ku mashquulsan yihiin. Suuqa Xamar weyne waxaa uu safka hore ugu jiraa suuqyada sida tooska ah looga qaado canshuuraha waana suuqa kaliya oo aad ku arkeyso minishiibiyo aan hubeysneyn hadana ammaan ku shaqeysanaya ,sidaa awgeed maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe waxaa la gudboon in ay dib u eegaan xaalka Xamarweyne.
W/Q: Maxamed Ibraahim Macalimuu
Previous PostQ/Midowe ayaa ku baaqay Xubno ay ku jiraan Cabdi Qeybdiid iyo Morgan in aan lagu soo darin Aqalka sare Cabsi ay kaqabto!! Next PostAkhriso magacyada qaar kamid ah xubnaha Dowlada Galmudug u matalaya Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya!!